Waiter & Waitress | Hotel by the Red Canal, Mandalay ﻿
11.2.2019, Full time , Hospitality / Hotel
•	ဧည့်သည်များအား ယဉ်ကျေးပျူငှာစွာ ပြောဆိုဆက်ဆံနိုင်ရမည်။
•	လုပ်ငန်းကို အချိန်ပေးလုပ်ကိုင်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။
•	ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး ကောင်းမွန်ရမည်။
•	၀န်ဆောင်မှု့ပေးရမည့်လုပ်ငန်းဖြစ်သဖြင့် စိတ်ရှည်သောသူ ဖြစ်ရမည်။
•	အထက်မှညွန်ကြားချက်အတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။
•	ဘွဲ့ ရ (သို့ မဟုတ်) အထက်တန်း အောင်မြင်ပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။
•	ဧည့်သည်အား ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့်လုပ်ငန်းကို စိတ်ဝင်စားသူဖြစ်ရမည်။
•	စားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်း အတွေ့အကြုံရှိသူကို ဦးစားပေးမည်။
•	Waiter/Waitress Service ကိုသိနားလည်ခြင်းထက် သင်ယူလိုစိတ်ရှိသူဖြစ်ရမည်။စည်းကမ်းလုိုက်နာနိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။
Work location Corner of 63 & 22 streets I Aung Myae Tha Zan Township 417
Company Industry: Waiter & Waitress
Job posted: 11/2/2019
15 Days, Full time , Hospitality / Hotel
•	ဧညျ့သညျမြားအား ယဉျကြေးပြူငှာစှာ ပွောဆိုဆကျဆံနိုငျရမညျ။ •	လုပျငနျးကို အခြိနျပေးလုပျကိုငျနိုငျသူ ဖွဈရမညျ။ •	ပေါငျးသငျးဆကျဆံရေး ကောငျးမှနျရမညျ။ •	၀နျဆောငျမှု့ပေးရမညျ့လုပျငနျးဖွဈသဖွငျ့ စိတျရှ ...
•	Manages daily restaurant operations and assists with menu planning maintains sanitation standards and assists servers and hosts on the floor during peak meal periods. •	Strives to continually improve guest and employee satisfaction and maximize the financial performance in areas of responsibility. DUTIES AND RESPONSIBILITIES: •	Oversea the dining area, supervises food and beverage service staff in accordance with operating policies that he or she may help establish. •	Createsapositive team atmosphere among Team Members. � ...
•	ရရှေညျ လကျတှဲ လုပျဆောငျနိုငျသူ ဖွဈရပွီး စိတျရှညျသညျးခံနိုငျရမညျ။ •	လူအမြားနဲ့ပွောဆိုဆကျဆံခွငျးကို ကွိုကျနှဈသကျသူဖွဈရမညျ။ •	အလုပျသမားရုံး၊ HR အလုပျနှငျ့ ပတျသကျသော သကျဆိုငျရာ ရုံးမြားသို့ သှာ� ...
17 Days, Full time , Hospitality / Hotel
•	ဘှဲ့ ရဖွဈရမညျ •	လုပျငနျးအတှအေ့ကွုံအနညျးဆုံး (1) နှဈ ရှိရမညျ။ •	သကျဆိုငျရာဌာန မြားနှငျ့ပွောဆိုဆကျဆံရေား ကောငျးမှနျသူ ဖွဈပွီး အသငျးအဖှဲ့နဲ့လုပျကိုငျနိုငျသူဖွဈရမညျ •	ရရှေညျ လကျတှဲ လုပျဆောငျနို� ...
•	Able to handle multiple tasks with capability of prioritizing and planning work activities. •	Demonstrate accuracy and thoroughness with ability to improve and promote quality and safety.
•	မိမိလုပျဆောငျရမညျ့လုပျငနျးပိုငျးအား တာဝနျယူနိုငျရမညျ။ •	Team ကို ဦးဆောငျနိုငျရမညျ။ •	ခေါငျးဆောငျမှုအရညျအသှေးရှိရမညျ။ •	စားဖိုမှုးလုပျသကျ အနညျးဆုံး (2) နှဈရှိရမညျ။ •	အသကျ (50) နှဈအောကျဖွဈရမညျ။ •	ဥရ� ...
•	Power Supply- Check & record transformer auto tapping no and capacitor bank, ampere and line voltage at main switch board and fuel level, oil level, coolant level, battery voltage & running hour of generator. •	ELV system- Check4CO phone lines from key phone, camera condition & play back of CCTV system & Fire alarm panel. •	Washing & Maintaining air-con filter, and record the procedure. •	List the usage and balance of Gen-set diesel and report to Finance Dept. •	Servicing air-con per three months and maki ...
•	Prepared food in assigned job/section in the kitchen as per duty roster. •	Ensure food hygiene and safety in the kitchen with kitchen helpers and kitchen staff. •	Ensure proper storage of food in fridge, freezer and storeroom. •	Prepare mis-en-place and replenish food stock in all sections daily. •	Prepare food to required standards and specifications. •	Undertake duty asaNight Cook or Breakfast Cook. •	Performs other duties and responsibilities as assigned by the Chef from time to time.
•	Any graduate or Degree holder, customer service training will be added advantage •	Minimum3years experiences in Front Office Operations & Management Level •	Male/Female age below 35 years old. •	Fluent in English4skills. •	Handles and resolves all Front Office queries and complaints. •	Able to train the team and people development skills. •	Excellency in Communication, Leading and Inter-personal skills. •	Supervise and administrate all front office function. •	Performs other duties and responsibilities as as ...
305 Days, Full time , Hospitality / Hotel
•	လုံခြုံရေးနည်းစနစ်များကို သေချာစွာသိရှိရမည်။ •	စိတ်ရှည် သည်းခံနိုင်ရမည်။ •	ကျန်းမာရေးအထူးကောင်းမွန်ရမည်။ •	စည်းကမ်းလိုက်နာသူဖြစ်ရမည်။
•	အသင်းအဖွဲ့စိတ်ဓါတ်ဖြင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	တက်ကြွဖြတ်လပ်၍ အကျင့်စာရိတ္တ ကောင်းမွန်သူများ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ •	ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်သူ ဖြစ်ရမည်။
•	အများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်သူ ၊ သင်ယူလိုစိတ်ရှိသူဖြစ်ရမည် •	လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ မရှိသူများလည်း လျှောက်ထားနိူင်ပါသည်။ •	ရုပ်ရည်အသင့်အတင့်ရှိပြီး ၊ လူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်သူ၊
•	Knowledge in Front Office Operations •	Good in personality and communication skills
•	ဧည့်သည်များအားယဉ်ကျေး ပျူငှာစွာပြောဆိုဆက်ဆံနိုင်ရမည်။ •	လုပ်ငန်းကိုအချိန်ပေးလုပ်ကိုင်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။ •	ရုံးပိုင်းဆိုင်ရာများအားစနစ်တကျလုပ်ကိုင်နိုင်ရမည်။ •	အထက်မှညွန်ကြားချက်အတိုင်းလို� ...
•	အသင်းအဖွဲ့စိတ်ဓါတ်ဖြင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	တက်ကြွဖြတ်လပ်၍ အကျင့်စာရိတ္တ ကောင်းမွန်သူများ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
•	ကျန်းမာသန်စွမ်းပြီး သွက်လက်သူဖြစ်ရမည်။ •	Day \_ Night တာဝန်ထမ်းဆောင်နိူင်သူ။ •	လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသူ ဦးစားပေးမည်။ •	လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ မရှိသူများလည်း လျှောက်ထားနိူင်ပါသည်။
•	လူမှုဆက်ဆံရေး ကောင်းမွန်၍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။
Job ads in Spa
Job ads in Spa and in Mandalay Region
•	Excellent skills on creating design using Adobe product such as illustrator, Photoshop and indesign •	Using Internet, Email, Microsoft Office Word, Excel , Power-point, Adobe PageMaker •	Common applications such as MS office, email and file sharing •	Other admin work and necessary company's work.
•	Developsastrong knowledge of the hotel's facilities and services and of the surrounding community. •	Provides guests with information about attractions, facilities, services, and activities in or outside the property. •	Makes guest reservations for air or other forms of transportation when requested. •	Obtains necessary itinerary tickets. •	Makes guest reservations for the boat ticket and other forms of entertainment when requested. Obtains necessary tickets and provides directions to facilities. •	Organizes special functio ...
Restaurant Manager & Assistant Restaurant Manager
DUTIES AND RESPONSIBILITIES: •	Oversea the dining area, supervises food and beverage service staff in accordance with operating policies that he or she may help establish. •	Createsapositive team atmosphere among Team Members. •	Maintains records of staff periodic manner and operating costs. •	Provides feedback and coaching to the Team regularly. •	Understands building capability through Cross training •	Treats all Team Members fairly, with respect. •	Sets high standards for appropriate team behaviour on shift. •	Works ...
•	ဧည့်သည်များအားယဉ်ကျေး ပျူငှာစွာပြောဆိုဆက်ဆံနိုင်ရမည်။ •	လုပ်ငန်းကိုအချိန်ပေးလုပ်ကိုင်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။ •	ရုံးပိုင်းဆိုင်ရာများအားစနစ်တကျလုပ်ကိုင်နိုင်ရမည်။ •	အထက်မှညွန်ကြားချက်အတိုင်းလိ ...
•	ဧည့်သည်များအား ယဉ်ကျေးပျူငှာစွာ ပြောဆိုဆက်ဆံနိုင်ရမည်။ •	လုပ်ငန်းကို အချိန်ပေးလုပ်ကိုင်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။ •	ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး ကောင်းမွန်ရမည်။ •	၀န်ဆောင်မှု့ပေးရမည့်လုပ်ငန်းဖြစ်သဖြင့် စိတ်ရှည ...
SPA Tharapist Manager
•	Maintain knowledge of spa and products •	Ability to perform all operational duties within division •	Ensure client satisfaction •	Manage spa reservations to maximize daily revenues •	Monitor inventory of supplies and assure product integrity •	Monitor and track client feedback •	Cleanliness of all area •	Maintain spa staff schedules •	Assist with training and development of spa staff •	Monitor and evaluate spa colleagues’ performance •	Ensure punctuality of staffs •	Ensure colleagues are dressed and groome ...
322 Days, Full time , Hospitality / Hotel
344 Days, Full time , Hospitality / Hotel
451 Days, Full time , Hospitality / Hotel
M&E Professional Engineer
484 Days, Full time , Hospitality / Hotel
M&E Professional Engineer (OR)Assistant (For Mandalay) •	Highly motivated andateam player with good communication skills •	Performs Corrective/Preventive Maintenance activities of all equipment in his specified area of responsibility. •	Troubleshoots electro-mechanical problems, which arises during production in his designated area.
553 Days, Full time , Hospitality / Hotel
Waiter & Waitress Hotel & Restaurant obs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Jobsinyangon Hotel by the Red Canal, Mandalay Hotel & Restaurant Jobs Hotel & Restaurant Jobs Waiter & Waitress Jobs in Myanmar, jobs in Yangon
Work in Yangon (Rangoon)(8885)
Work in Yangon Region(1781)
Waiter(Best Western Chinatown Hotel)
Waitress & Cashier For Japanese Restaurant(Urgent) (Code-30254)
Power Maw Shan Co., Ltd
Tanintharyi Region 10 Days
Mandalay City 15 Days
Yangon Region 66 Days
Yangon Region 87 Days
Naypyitaw City 88 Days
Yangon Region 108 Days
Waiter / Dishwasher
Tanintharyi Region 118 Days
Mandalay Region 166 Days
Tanintharyi Region 198 Days